Qalabka Android ayaa hadda loo heli karaa Galaxy Tab S4 | Androidsis
Waxay u muuqataa in toddobaadkan, ragga ka socda Samsung ay dhigeen baytariyada oo ficil ahaan maalin kasta waxaan haynaa warar la xiriira cusbooneysiinta Android Pie ee qaar ka mid ah boosteejooyinkooda. Hadda waa markii kiniinka Galaxy Tab S4, kiniin ah inuu isaguwaxay suuqa timid bishii sideedaad ee sanadkii hore.
Dhowr maalmood ka hor ayay ahayd Galaxy J8 terminaalka oo isna bilaabay hel Android Pie. Dhowr saacadood ka hor, waxaan sidoo kale kugula socodsiinnay bilowga nooca sagaalaad ee Android ee loogu talagalay Galaxy J6. Cusbooneysiinta Galaxy Tab S4 ayaa bilaabatay in laga heli karo Faransiiska si hadhow loo gaarsiiyo dalalka intiisa kale.
Way cadahay Samsung wuxuu jecel yahay inuu kala duwanaado Iyo cusbooneysiinta 'Android Pie' waxaan ku aragnaa gacanta koowaad. Ruushka ayaa ahaa waddanka loo xulay inuu bilaabo inuu ku raaxeysto Android Pie ee Galaxy J8. Talyaaniga loogu talagalay Galaxy J6 iyo hadda Faransiiska loogu talagalay kiniiniga Galaxy Tab S4.
Cusbooneysiinta 'Android Pie' ee loogu talagalay Galaxy Tab S4 waxaa ka mid ah ficil ahaan howlaha caadiga ah ee ay Google ku soo bandhigtay soo saarista noocyadan, marka lagu daro isdhexgalka cusub ee garaafka ah ee ay Samsung ku siineyso wareegga illaa iyo hadda ay na tustay sida lakabka qaabeynta , lakab in hadda waa dheecaan badan.
Waqtiga la daabacayo qodobkan, kaliya cusbooneysiinta 'Android Pie' ee loogu talagalay Galaxy Tab S4 oo leh xiriir LTE (SM-T835) ayaa la sii daayay lambarka qalabka ayaa ah T835XXU2BSD1. Waxay u egtahay in saacado yar gudahood, nooca kuxiran WiFi uu sidoo kale heli doono cusbooneysiinta u dhiganta.
Si aad u hubiso haddii qalabkaagu uu sugayo inuu helo cusboonaysiinta, waa inaad tagtaa Settings iyo Updates Software ka dibna riix Ku soo dejiso cusbooneysiinta gacanta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Android Pie ayaa hadda loo heli karaa Galaxy Tab S4